Xaqiiqo Raadinta BBC-da : Putin maku saxanyahay aragtidiisa shimbiraha? - BBC News Somali
Xaqiiqo Raadinta BBC-da : Putin maku saxanyahay aragtidiisa shimbiraha?
Madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin ayaa ka digay in aad loogu tiirsanaado tamarta dib loo cusboonaysiin karo, taas oo uu sheegay in ay u darantahay shimbiraha iyo xayawaanka kale.
Isaga oo kaa hadlayay shirweyne ku saabsan warshadaha adduunka ayuu yiri "Marwaxadaha tamarta laga dhaliyo waa wax fiican, balse shimbiraha ma laga fikiray?, meeqa shimbirood ayaa dhimanaya?" ayuu is weeydiiyay, wuxuuna ku daray "Marwaxadahan waxa ay sameeyaan ruxan, taasna waxaa banaanka dhulka uga soo baxa dixiriga, tani ma ahan kaftan".
Cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in marwaxadaha dabeysha ku shaqeeya ee tamarta dhaliya ay laayaan shimbiriaha.
Daraasad uu sameeyay London School of Economics waxa lagu sheegay in shimbiraha dhimanaya marka la gaaro sannadka 2020-ka ay gaarayaan illaa 106 kun oo shimbirood sannad kasta dalka UK.
Balse qiyaaso laga sameeyay Maraykanka ayaa tirada ka dhigaya 10 kun illaa 500 oo kun.
BBC-da ma aysan arag wax daraasad ah oo Ruushka laga sameeyay.
Marwaxadaha dabeysha oo kaliya ma ahan kuwa halista ku haya shimbiraha, ee sidoo kale waxaa la sheegay in qalabka korontada ee ku shaqeeya shidaalka ku jira lakabyada dhulka in ay laayaan shimbiro aad u badan, iyada oo Maraykanka sannad kasta ay dhintaan 7 kun oo shimbirood.
Mac-hadka LSE waxa uu sheegayaa in halista ugu weyn ee shimbiraha haysata aysan ahayn marwaxadaha, balse ay yihiin bisidaha, kuwaas oo sannad kasta dila kumanaan kun oo shimbirood.
Waxaase laga yaabaa in Putun uu maanka ku hayay wax ka badan daryeelka shimbiraha, sababtoo ah Ruushka waa soo saaraha ugu weyn ee tamarta aan ahayn tan dib loo isticmaali karo, wuxuuna soo saaraa shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah.
Wax soo saarkaan uu dibedda u dhoofiyo, ayuu Ruushka ka helaa miisaaniyad badan.